Jobs Archives |5၏စာမျက်နှာ 2034 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » ဂျော့ဘ် (စာမျက်နှာ 5)
Director of Photography Company Subscribers only City, State San Jose, CA Duration 6/8 and 6/9 Salary / Rate not provided Job posted on 05/29/20 Apply by 06/07/20 Website not provided Share About the Job Travelling health news organization seeksaDP/One person army in the San Jose/Palo Alto area with the following equipment on Monday June 8th and Tuesday June ...
Video Editor Company Confidential City, State Remote Duration not provided Salary / Rate not provided Job posted on 05/29/20 Website not provided Share About the Job I’m looking to take on an additional part time video editor. I runahandful of established YouTube channels, and I’m looking to hire someone to help me out with my Star Wars channel. ...
မီဒီယာအရောင်းအကောင့်အလုပ်အမှုဆောင်ကုမ္ပဏီသာစာရင်းပေးသွင်းသူသာမြို့၊ ပြည်နယ်စတိုကန်း၊ WA အချိန်မပေးရလစာ / နှုန်းမပေးရသေး 05/26/20 တွင်တင်ထားသောအလုပ်အကိုင် 06/30/20 တွင်တင်ထားသည်။ ၀ ဘ်ဆိုဒ်မပါ ၀ င်ပါ။ အလုပ်အကိုင်အကြောင်း KXLY TV & Phase3Digital KXLY Broadcasting Group ၏မော်ဂန်မာဖီမီဒီယာကုမ္ပဏီ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မိသားစုပိုင်ဖြစ်ပြီးပထမ ဦး ဆုံးသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှိသည့်လူများ ...
Talent Producer ကုမ္ပဏီ၏လျှို့ဝှက်မြို့တော်၊ နယူးယောက်ပြည်နယ်၊ ပြည်နယ်၊ နယူးယောက်ခ်ကြာချိန်မပေးရလစာနှုန်းထားမသတ်မှတ်ရအလုပ်အကိုင် 05/26/20 တွင်တင်ထားသည်။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မျှဝေခြင်းအလုပ်အကိုင်နှင့် ပတ်သက်၍ ဖော်ပြထားသောထုတ်လုပ်သူရာထူးနှစ်ခုအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအားလာမည့်စာရွက်စာတမ်းတွင်ရှာဖွေပါ။ အမျိုးသမီး ensemble သွန်း featuring ။ *** စီးရီးများသည်အရေးကြီးသောလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ protocol များကိုလိုက်နာလိမ့်မည်။
Food Stylist ကုမ္ပဏီသာစာရင်းသွင်းထားသည့် City, State Los Angeles, CA Duration 5/27 and 5/28 လစာ / နှုန်းမပေးရသေး 05/26/20 တွင်တင်ထားသည့်အလုပ်အကိုင်သည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်မျှဝေခြင်းအလုပ်အကိုင်အကြောင်းမျှဝေခြင်း 2- သေးငယ်သောအတွက်စားနပ်ရိက္ခာအထောက်အကူပြုရန်ရှာဖွေနေသည်။ LA ၌ (ကြာသပတေးနေ့) ဒီ Weds ကိုစတင်ရန်နေ့တစ်ရက်ရိုက်ပါ။ အသေးစားဘတ်ဂျက်စီးပွားဖြစ်အကြောင်းအရာ။ ရရှိနိုင်ပါကသင်၏အချက်အလက်နှင့် reel / web ဖြင့်လျှောက်ထားပါ။ အဆင့်မြှင့်တင်ပါ
Colist Company ၏လျှို့ဝှက်မြို့တော်၊ ပြည်နယ်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်ပြည်နယ်၊ အေဒီအချိန်မပေးရလစာ / နှုန်းမပေးရသေး 05/26/20 တွင်တင်ထားသောအလုပ်အကိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မျှဝေခြင်းအလုပ်အကိုင်မျှဝေခြင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဇာတ်လမ်းတိုအတွက်အရောင်အသွေးစုံကိုရှာဖွေနေသည်။ ငါတို့ရုပ်ရှင်၏အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်မှာ Umbra သည် Inessa နှင့်ပတ်သက်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသည်းထိတ်ရင်ဖိုဖြစ်သည်။ Inessa - တချိန်ကတောက်ပ။ ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိသောမိန်းကလေး ...
အကြီးတန်း / ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲသောထုတ်လုပ်သူကုမ္ပဏီလျှို့ဝှက်မြို့၊ ပြည်နယ်နယူးယောက်၊ နယူးယော့ခ်ကြာချိန်မပေးရလစာ / နှုန်းမပေးရသေးသော ၀ ဘ်ဆိုဒ် 05/26/20 တွင်တင်ထားသည့်အလုပ်အကိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မျှဝေခြင်းအလုပ်အကိုင်အကြောင်းဝေငှမည့်လာမည့်စာရွက်စာတမ်းတွင်အောက်ဖော်ပြပါထုတ်လုပ်သူရာထူးနှစ်ခုအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုရှာဖွေခြင်း အမျိုးသမီး ensemble သရုပ် featuring -follow ။ *** စီးရီးများသည်အရေးပါသောလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ protocol များကိုလိုက်နာလိမ့်မည်။
Drone Operator ကုမ္ပဏီ၏လျှို့ဝှက်မြို့တော်၊ ပြည်နယ် Carrolton, TX လစာ / နှုန်းမပေးရသေးသော ၀ န်ဆောင်မှု 05/26/20 တွင်တင်ထားသည်။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မျှဝေခြင်းအလုပ်အကိုင်နှင့်ပတ်သက်သောမျှဝေခြင်း Drone Op သည် Carrolton tx တွင်လာမည့် ၂ ပတ်အတွင်းရိုက်ကူးရန်ရှာဖွေနေသည်။ ရိုက်ချက်တချို့ဟာကုန်ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံတခုဖြစ်တယ်။ ဇီဝနှင့်သင်၏နေ့နှုန်းကိုပို့ပေးပါ။ ...
5 ၏စာမျက်နှာ 2,034«ပထမဦးစွာ...«34567 » 102030...နောက်ဆုံး»